अनमोलको कपालका कारण वैशाखमा पुग्यो ‘पारस’ : RajdhaniDaily.com -
Home Not-to-be-missed अनमोलको कपालका कारण वैशाखमा पुग्यो ‘पारस’
काठमाडौं । अनमोल केसीको चलचित्र ‘पारस’को छायांकन सुरु नहुँदै सरेको छ । यो फिल्मको छायांकन फागुनको अन्तिम साताबाट सुरु गरिने भन्दै यसका निर्माता भुवन केसी छायांकनको तयारीमा जुटेका थिए । तर, यो समयमा अभिनेता अनमोलले अर्को फिल्मलाई समय दिनुपर्ने भएपछि अब चलचित्र पारसको छायांकन वैशाखमा मात्र सुरु हुने भएको छ ।
यो साताबाट अभिनेता अनमोल केसी नयाँ फिल्म ‘ए मेरो हजुर–४’को बाँकी छायांकनमा जोडिने भएका छन् । यो फिल्मका लागि विरामी पात्रको भूमिकामा प्रस्तुत हुन लागेको अनमोलले आफ्नो तौल पनि सोहीअनुसार घटाएका छन् । यो फिल्ममा उनको कपाल निकै छोटो रहनेछ । तर, चलचित्र पारसमा उनको कपाल लामो हुनुपर्ने छ । ‘ए मेरो हजुर–४’का लागि अनमोलले कपाल छोट्याएपछि निर्माता भुवन केसीले पारसको छायांकन केही दिनलाई पछि सार्नुपरेको हो ।
निर्माता भुवन केसीका अनुसार अनमोललाई ‘ए मेरो हजुर–४’का लागि कपाल नछोट्याउन अनुरोध गरिएको थियो । तर, ‘ए मेरो हजुर–४’ का निर्माता सुनिल कुमार थापाले उनको अनुरोध मानेनन् । अनमोलले छोटो कपाल बनाउनुपर्ने पूर्वसम्झौतालाई सुनिलले स्मरण गराएपछि भुवन केसी सहमत भएका हुन् ।
जसका कारण चलचित्र पारसको छायांकन फागुनमा सुरु हुन सकेन । अब अनमोल केसीको कपाल केही लामो हुनुका साथै शारीरिक तौल पनि बढेपछि बल्ल भुवनले चलचित्र पारसको छायांकन गर्ने बताएका छन् । कपालका कारण दुई फिल्मका छायांकनमा केही समस्या आएपछि अनमोलले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो कपाललाई दोषी देखाउँदै फोटो पोस्ट गरेका छन् ।
निर्मला हत्याको दुई वर्षः आईजीपी थापाले टुंगो लगाउलान् ?
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज दुई वर्ष पूरा भयो । यही बीचमा नेपाल प्रहरीका दुई जना प्रहरी प्रमुख...
प्रदेश ४ Sushila Bishwokarma - June 24, 2020 0
बागलुङ । जन्मदर कम, गाउँबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराईको दर तिव्र । अभिभावकमा अंग्रेजी प्रतिको मोह बढ्दोलगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयमा दिन प्रतिदिन विद्यार्थीको संख्या कमी...
Breaking News Kumar Raut - June 19, 2020 0
प्रदेश Dhruba Lamsal - December 27, 2020 0
Breaking News राजधानी संवाददाता - April 6, 2021 0
प्रमुख Dhruba Lamsal - October 3, 2020 0